Maraoka: Mandray Ny Ramadan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2018 14:43 GMT
Lovefrom1stbite mizara nahandro momba ny sakafo matsiro Ramadan chabakia, anisan'izany ny sarin'ireo karazan-tsakafo:
Al Miraat/The Moroccan Mirror nanadino ny teny, raha tokony hizara ity sary ity:
Tara iray andro?
Amin'ity taona ity, ny Ramadan any Maraoka dia hanomboka tara iray andro tsy tahaka ny ankamaroan'izao tontolo izao. Vonona hanomboka ny Ramadam amin'ny Talata i Maraoka, Maoritania, sy Iran, zava-misy izay nahatonga ireo bilaogera sasany handinika. 27monthswithoutbaseball, mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Peace Corps ao Maraoka, milaza momba ny fanemorana:
Noho izany, nanomboka androany ny Ramadany, farafaharatsiny tsy tany Maraoka. Tsy dia misy dikany ho ahy izany – raha ny marina, afaka maminavina ny fizotry ny volana miaraka amin'ny fahamarinana tanteraka manomboka izao ka hatramin'ny fiafaràn'ny fotoana ny mpahay siansa- saingy tsy maintsy miandry izy ireo mandra-pitenin'ny imams hoe Ramadany izao. Mieritreritra aho fa misy dikany kokoa ny fahafantarana fa samihafa izany any amin'ny firenena tsirairay – nanomboka omaly ny Ramadany tany Alzeria, Tonizia sy Libya, androany ny tany Egypta sy ny ankamaroan'ny tontolo Arabo, ary hanomboka rahampitso ny ao Maraoka, Maoritania ary Iran. Iza no mahalala, angamba tsy mitovy ny fandehan'ny volana isaky ny firenena rehetra. Tsy voatery manana ny valiny foana ny siansa. Novaintsika ny fotoana omaly hariva – niverina tany aloha!
North Africa Notes, izay vahiny ao Maraoka ihany koa, naneho hevitra mikasika ny fahatsapany rehefa nandre ny vaovao fa mbola tsy nanomboka ny Ramadany:
Saingy androany, Alatsinainy, mahatsiaro tena ho Ramadany, mieritreritra aho fa efa vonona tanteraka ny olona handre ny fanambarana fa manomboka androany izany satria sarotra ho azy ireo ny hisakafo. Raha nisakafo maraina niaraka tamin'ny fianakavian ‘ny namako aho, niresaka momba izany izahay, toa tahaka ny karazana hafahafa ny misakafo. Faly izahay rehetra anefa satria nanapa-kevitra ny hanafoana ny ora mandroso amin'izao maraina izao ny governemanta Maraokana, mba hahamora kokoa ny Ramadany ho an'ny rehetra, hoy izy ireo. Ka nahemotray toy ny teo aloha ny famataranandro ary nahazo adiny iray. Nanjary amin'ny 9 maraina ny amin'ny 10 ora maraina. Lasa amin'ny 7 ny masoandro mody raha tokony amin'ny 8, Alhamdulilah.